Ilabhorethri inemodyuli entsha, asikho isidingo sokwesaba amashubhu amaningi wokuhlola noma amapayipi | Xipingzhe
Into etholakala yonke indawo elabhorethri yimikhumbi ehlukahlukene yokuhlola. Amabhodlela namakani, imininingwane ehlukile, kanye nokusetshenziswa okwehlukile kuvame ukwenza abasebenzi bokuhlanza balahlekelwe. Ikakhulukazi ukuhlanzwa kwamapayipi kanye namashubhu okuhlola kuma-glassware kuhlala kwenza abantu baqaphele. Njengoba amalabhorethri amaningi asencike ekuhlanzweni okwenziwa ngezandla kwamaglasi, kunamaphutha ajwayelekile noma ukusebenza kahle okuncane kule nqubo.
Inkampani ye-XPZ manje yethula obhasikidi abasha ababili bokuhlanza i-pipette kanye ne-tube batch, ukuhlanza ama-multi-specification, ngethemba lokuthi ngala mabhasikidi amabili angasiza ama-laboratories amaningi ukuhlanza imikhumbi yokuhlola ngempumelelo, futhi ngasikhathi sinye angahlanza ama-glasswares amaningi.
Kuyaziwa ukuthi izindawo eziningi zaselabhoratri ziyinkimbinkimbi ngokwedlulele - kungaba ukuminyana noma ukuhlangana, lokhu kufaka ingcindezi enkulu engadingekile kubasebenzi baselabhoratri. Ikakhulukazi efana nepipette kanye ne-tube yokuhlola i-glassware enjalo ayibuthaka nje kuphela kepha futhi isetshenziswa kaningi, lokho kusho ukuthi zidinga ukugcinwa futhi zihanjiswe ngokunakekelwa okwengeziwe.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yenani lezingilazi ezinjalo zivame ukuba zinkulu, ngaphambi nangemva kokuthuthwa kwazo ziye endaweni yokuhlanza i-glasware, abasebenzi abathintekayo kufanele banake izingqinamba ezisebenza kahle nezenhlanzeko. Kepha lezi zimfuno ezimbili zivame ukwakha ukuphikisana futhi kunzima ukuzixazulula.
Lapha, ake sibheke ukuthi inkampani ye-XPZ isebenzisa kanjani obhasikidi bayo abasha ingaba nayo ngazo zombili izindlela.
Into 1: Ibhasikidi lomjovo wepipette module
Le FA-Z11 inokuphakama okuphelele okungama-373MM, ububanzi obungu-528MM, nebanga lobubanzi obungu-558MM. Isisekelo sine-roller, evumelana nokudonsa nokudonsa kusuka ku-washer ye-glassware.
Ngokuvamile, i-glassware washer ifakwe ebhokisatri ihlanza kabili, futhi ukuphakama kwepipette kungahlanzwa ngaphakathi kwe-46CM. Njengamanje, kunezindlela ezimbili zokuhlanza amapayipi aphezulu kune-46CM. Indlela yokuqala ukuthenga imodeli ye-Flash enezingqimba ezintathu. Inkampani ye-XPZ yakhelwe imikhiqizo emihle ngemizamo emikhulu futhi iqhubeka nokwenza izinto ezintsha zobuchwepheshe. Manje, leli bhasikidi elihlanza i-pipette lingaxazulula inkinga yokuhlanza i-pipette yokucaciswa okuphezulu kwabasebenzisi - imigqa emithathu yesakhiwo isetshenziselwa ukubeka amapayipi wezincazelo ezahlukahlukene, i-pipette kanye ne-inlet yamanzi yakha oxhumana naye oseduze ngesikhathi sokuhlanzwa. umugqa u-550MM, ongasetshenziswa ukubeka amapayipi ayi-10 wokucaciswa kuka-10-100ml; Ukuphakama okuphezulu kwesikhala somugqa wesibili ngu-500MM, ongasetshenziswa ukubamba amapayipi ayi-14 wokucaciswa okungu-10-25ml. yi-440MM, engasetshenziswa ukubamba i-pipette eyi-14 1-10ml. Ngamanye amagama, ubhasikidi wemodyuli ye-injection pipette ungasetshenziswa kahle kumshini wokuhlanza wamabhodlela wokuhlanza ophindwe kabili kanye ne-glassware washer eyakhelwe ngaphakathi. Kulungile ukukhetha i-pipette enezidingo eziphezulu zokuhlanza zabasebenzisi.
Into yesi-2: Ibhasikidi yekota
Ishubhu yokuhlola, ishubhu le-centrifuge, i-colorimetric tube, i-centrifuge tube isetshenziswa kakhulu ezikhungweni zezokwelapha nezamakhemikhali, zokulinganisa nokuhlola.
Kwilabhorethri, ithubhu yokuhlola ingasetshenziselwa inani elincane lesitsha se-reagent reaction, ukuhlanza okwenziwa ngesandla kudinga ukusebenzisa ibhulashi leshubhu lokuhlola ukufeza inhlanzeko ejwayelekile; Lapho ishubhu le-centrifuge lihlanzwa ngesandla, ibhulashi kufanele lisetshenziselwe ukususa ukungcola nothuli , bese ugeza ngamanzi ahlanzekile. Ishubhu ye-colorimetric isetshenziselwa ukukala ukuxilongwa kwesixazululo futhi ibone umehluko wombala ngokuqhathanisa. Naka ukungabhubhisi udonga lwepayipi ngesikhathi sokuhlanza, okuzothinta ukuhanjiswa kwalo.
Ngiwageza kanjani la mashubhu ngobuningi? Ayikho inkinga!
Umkhiqizo ochazwe lapha ubhasikidi wekota (T-401/402/403/404), wenzelwe lezo zimo ngqo. Usayizi wayo ophelele ungama-218MM ububanzi, ububanzi bungu-218MM., Ukuphakama kungu-100/127/187 / 230mm izinhlobo ezine zokuphakama, kungaxazulula amashubhu ahlukahlukene aphezulu futhi aphansi.Ibhasikidi elilodwa lingabamba amashubhu angama-200 ukuthi acutshungulwe ngasikhathi sinye. Amaraki amane obhasikidi anezincazelo ezahlukahlukene, ahlukaniswe komunye nomunye, angasetshenziselwa ukuhlanza imikhumbi yezindawo eziphakeme ezahlukahlukene; Ubhasikidi wekota ngamunye ufakwe ikhava (ukuvimbela amanzi aqinile ukuthi angaphumi esitsheni ngesikhathi sokuhlanza), okuthinta umphumela wokuhlanza. Ngasikhathi sinye, kunezindawo ezahlukahlukene ngaphakathi ezingasetshenziselwa ukuhlanza amashubhu ahlukile.
Amapharamitha encazelo webhasikidi ngalinye lokuphakama anjengokulandelayo:
Ubhasikidi wokuqala wesigamu ukuphakama okungu-100MM, ububanzi obungu-218MM, nobubanzi obungu-218MM. Usayizi omkhulu weshubhu wokuhlola obekwe ngu-12 * 75MM;
Ubhasikidi wesigamu sesibili ukuphakama u-127MM, ububanzi be-218MM, nobubanzi obungu-218MM. Usayizi omkhulu weshubhu wokuhlola ngu-12 * 105MM;
Ubhasikidi wesigamu sesithathu uphakeme nge-187MM, ububanzi be-218MM, nobubanzi obungu-218MM. Usayizi omkhulu weshubhu wokuhlola ngu-12 * 165MM;
Ubhasikidi wesigamu sesine ukuphakama okungu-230MM, ububanzi obungu-218MM, nobubanzi obungu-218MM. Usayizi omkhulu weshubhu wokuhlola ngu-12 * 200MM.
Cabanga ukuthi ilabhorethri inakho ukwenza umsebenzi osizayo wokuwasha amashubhu wokuhlola, ngokungangabazeki izosebenza ngempumelelo futhi ibe lula. Ngoba ikhekhethi ngalinye lekota lingahlanza izitsha eziyi-100-160; ngenkathi uchungechunge lwethu lwe-Aurora lungabeka obhasikidi abayi-8 bekota ngasikhathi sinye, futhi uchungechunge lwethu lweRising lungabamba obhasikidi abangu-12 bekota ngasikhathi sinye.
La mabhasikidi amasha angenhla aklanywe ngobuciko ngabakwaHangzhou Xipingzhe Instruments Technology Co., Ltd. La mabhasikidi amabili enziwe ngensimbi engagqwali yamazwe omhlaba esezingeni eliphakeme engu-316L. Azinabuthi futhi azinambitheki, amelana nokushisa okuphezulu, ukugqwala, nesikhunta se-slime, futhi angamelana nokunyakaza kwesikhathi eside. Ukuphatha, ukubulala amagciwane okushisa okuphezulu, ukufafaza ngengcindezi kanye neminye imisebenzi. Uma ilabhorethri yakho ifuna ukonga isikhathi, umsebenzi, isikhala, amanzi, ugesi, nokuvikela ukuphepha ko-opharetha, ungakuphutheli!